Flash Player u Samsung Galaxy
> Resource > Android > Flash Player u Samsung Galaxy
Marka aad hesho brand cusub Samung Galaxy S5 / S4, waxaad la kulmi kartaa arrinta Flash: Galaxy S5 / S4 ma taageeri Flash! Taasi waa sababtoo ah Adobe ahaa ma sii daayo wax updates u Flash Player qalabka Android iyo ciyaaryahanka app Flash la soo saarey Play Store.
, Sidaas si ay u sameeyaan Flash shaqada aad S5 / S4, waxaan u baahan nahay labadaba Flash player (taas oo aan la rakibay-hore) oo ah browser-saddexaad. Halkan waa tallaabooyinka faahfaahsan oo ku saabsan sida loo rakibi ciyaaryahan flash aad Samsung Galaxy.
1 sahlo "Lama yaqaan Ilo"
Ka hor inta degsado Adobe Flash, hubi in qalabka Android aad ku xiran internetka. Tag Menu> -Settings> -Wararka iyo hubi "ilo Lama yaqaan" sanduuqa jeegga. Markaas ka jaftaa "OK" si loo xaqiijiyo in aad doorashada.
2 Download iyo rakibi Adobe Flash Player
On the page Archive of Adobe , hoos u dhaqaaq "Flash Player u Android 4.0 archives" dooro Flash Player 11.1 u Android 4.0 (11.1.115.69). Markaas download bilaabaa si toos ah. Dhowr ilbiriqsi ka dib, ka jaftaa "rakib" si loo soo dajiyo in aad telefoon.
3 Hel browser ah in ay taageertaa Flash on Galaxy
Ka dib markii ay ku rakibidda Adobe Flash, waxaad weli heli kartaa in midkoodna Chrome mana browser saamiyada (aka app internet) oo la shaqeeya Flash aad S5 / S4. Sidaas waa inaad heshaa browser kale taageera flash. Firefox u Android waa doorasho wanaagsan. Waa browser lagu kalsoonaan karo goobaha ugu badan. Fadlan aragto, ka dib markii uu ku rakibidda Flash, waxaad u baahan tahay guuleysatey Firefox (in Manager Task ah, taasuna way joojin, ka dibna mar labaad bilaabaan).
Tallaabooyinka kor ku xusan u muuqdaan in yar oo adag. Dhab ahaantii, halkii la isticmaalayo Adobe Flash Player, waxaad beddeli kartaa ciyaaryahan kale oo ukala Android. Wondershare Player u Android si weyn lagu talinayaa. Sidaa daraadeed, ma aha oo kaliya in aad isticmaali kartaa flash aan ka kaaftoomi kasta, laakiin sidoo kale aad ula xidhiido aad qalabka waaweyn-screen oo dhan si loo kobciyo noloshaada digital! Qaar ka mid ah qaababka ay muhiimka ah ee hoos ku qoran. Halkan waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa oo baadhaan hawlaha ka badan.
Qaababka ugu muhiimsan ee Wondershare Player u Android:
Si toos ah u daawado web videos ka goobaha video-qaybsiga caan badan sida YouTube, VEVO, Dailymotion, Metacafe vimeo oo dheeraad ah oo aan ku rakibidda barnaamijyadooda kale;
Waxaa lagu talinayaa in caanka ah videos xaalkiisa kulul oo cusub filimada kuu ah,
Ciyaaro ugu video & qaab audio files, xitaa DVD Folder wadaagaan aad pc Support;
"Daawan Later" shaqo aad u saamaxaaya in ay khasnado online videos in offline daawan xitaa iyada oo aan xiriir network;
Durduri videos iyo music ka Android qalabka waaweyn-screen kale sida PC, Mac iyo DLNA TV.
Flash Player u iPhone / iPad / iPod Touch
Sida loo Play Flash on Nexus 10
The Top 10 Nasteexo Nadaafadda iyo noolee aad Android
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga HTC in BlackBerry?
Top 5 Manager Android Audio: Maamul iyo raaxaysta Audio on Device Android